Ny programa beta an'ny Android Oreo ho an'ny BQ Aquaris X sy X Pro dia nisokatra | Androidsis
Manokatra ny programa Android Oreo beta ny BQ ho an'ny Aquaris X sy X Pro
Eder Ferreño | | About us, Android Version
Manohy ny lisitry ny fitaovana izay manavao ny Android Oreo. Nandritra ireo herinandro ireo dia nitombo ny isany. Ankehitriny, afaka manampy fitaovana roa hafa amin'ity lisitra ity isika. Hatramin'ny marika Espaniola BQ dia nanambara ny fisokafan'ny programa Android Oreo beta ho an'ny Aquaris X sy X Pro.
Manokatra ity dingana ity izay mpampiasa manana ny iray amin'ireo telefaona roa sy Raha misoratra anarana amin'ilay programa ianao dia afaka manandrana ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa amin'ny fitaovanao.. Io dia nambara tao amin'ny kaonty Twitter-dry zareo.
El ny fandidiana dia mitovy amin'ny programa fitsapana beta hafa. Tsy maintsy misoratra anarana amin'ny sehatra tsy miankina ianao ary avy eo mangataka fidirana amin'ny beta. Raha vantany vao omena azy io, ny mpampiasa dia afaka mahazo ny voalaza beta amin'ny fitaovany. Na dia, toa voafetra ny toerana, noho izany dia azo inoana fa betsaka ny tsy afaka misoratra anarana amin'ity programa ity.
Toy ny lojika, amin'ny maha beta anao, ireo mpampiasa manandrana dia mety sendra bibikely. Saingy, tsy momba ny kinova farany an'ny Android Oreo. Ankoatr'izay, amin'ny fepetra fampiasana beta dia hita izany ny fisian'ny lesoka dia tsy maintsy taterina amin'ny alàlan'ny forum. Mba hanampiana ireo injeniera hanatsara ny fiasan'ny rafitra fiasa.
Tsy te hampahafantatra bebe kokoa momba ny fahatongavan'ity beta ity ao amin'ny BQ Aquaris X sy X Pro. Tsy fantatra ny faharetan'ny fizahan-toetra na rehefa ho tonga ny kinova farany an'ny rafitra fiasa. Na dia antenaina aza fa amin'ny volana Janoary dia hisy antsipiriany manokana bebe kokoa ho fantatra.
Ny fanavaozana dia zaraina amin'ny alàlan'ny OTA. Ny fisoratana anarana ho an'ity programa Android Oreo beta ity ho an'ny fitaovana BQ dia misokatra izao. Azonao atao ny misoratra anarana sy mijery bebe kokoa momba ny toe-javatra misy azy amin'izany rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Manokatra ny programa Android Oreo beta ny BQ ho an'ny Aquaris X sy X Pro
Google Maps Go: GPS faran'izay maivana sy kely indrindra amin'ny GPS